I ▷ Cecotec Cecofry Compact PLUS ▷ Fikradaha iyo Qiimaha Fryer bilaa Saliid
Soo dhawoow hal maalin oo kale! Maanta waxaan u hibayn doonaa maqaalka Cecofry Compact Plus Fryer, mid ka mid ah kuwa ugu jaban suuqa. Shirkadda Isbaanishka ee Cecotec waxay ballan-qaadaysaa wax badan oo xagga tayada ah iyada oo la socota buug-gacmeedka ballaadhan ee qalabka naqshadaynta ee ugu dambeeyay, qaabkani ma noqon karo mid ka yar.
Cusboonaysii: Fryer-ka Cecotec Compact Plus hadda lama heli karo. Halkan waxaa ah beddelkaada ugu fiican:
* DigniinQaabkan hadda lama heli karo, laakiin waad ku beddeli kartaa noocyada kale ee Cecotec ama isaga model horumarsan.
Cecotec Fryer oo aan lahayn...
Tristar FR-6980 Deep Fryer
Soo ogow waxa ugu Wanaagsan 2021
Haddii aad wali xiisaynayso inaad wax walba ka ogaato shiilan inkasta oo aan la iibin, markaas waxaanu kaa caawin doonaa inaad ogaato inay tahay waxa aad raadinaysay. saliid yar ku kari, u helida shiilan caafimaad qaba qoyska oo dhan. Tan waxaan ku falanqeyn doonaa sifooyinkeeda ugu wanaagsan, waxyaabaha dheeriga ah ee ay bixiso, iyo fikradaha Isticmaalayaasha kale ee tijaabiyey iyo qiimaha ay noqon karto adiga.
Laakiin intaas oo keliya ma aha, sidoo kale waxaan is barbar dhigeynaa oo leh qaar ka mid ah shiilan qoto dheer ee ugu caansan suuqa. Aan tagno halkaas!
➤ Cecofry Compact Oil Fryer Price Free
➤ Sidee shaqadan badan u shaqeysaa?
Cecofry Compact Plus: Fikradaha
➤ Soo iibso Cecotec Compact Plus Air Fryer
Eeg Qiimaha ugu Wanaagsan onlayn
Aan aragno waxa aan ka filan karno qalabkan yar ee ay samaysay shirkadda Isbaanishka si loogu cuno cuntooyinka shiilan ee saliidda ah. Runtii ma shaqayn doontaa?
Waxyaabaha aan ka fekereyno marka aan iibsaneyno qalabkan yaryar waa xajmiga ama awoodda qaybaha u oggolaanaya karinta hal mar. The Mashiinka aan saliida lahayn ee Cecotec Compact plus waxay leedahay weel dhoobo ah oo leh 5 litir awoodda in mudnaanta u muuqataa in ka badan tartanka. Si kastaba ha ahaatee, waa in aan maskaxda ku haynaa in cuntada lagu riday dambiil u ogolaanaya in la helo 3/4 qof.
▷ 1000 W quwad
Fryer-kani waxa uu leeyahay iska caabin ah 1000 W oo ah awoodda ugu badan ee u oggolaanaysa shiil, dubi, dub iyo rooti wax uun cunto kasta ah. Waa in la ogaadaa in ay tahay qiimo xoogaa hooseeya marka loo eego alaabada kale ee la midka ah, samaynta wakhtiyada diyaarinta cunto karinta oo dheer.
Iska caabintani waxay leedahay heerkulbeeg analooga ah kaas wuxuu nidaamiyaa heerkulka 50 ilaa 250º C si uu mar walba ula qabsado cuntada aan rabno inaan karsano.
▷ Saacadaha laga bilaabo 0 ilaa 60 daqiiqo
Saacadahaan wuu ogolyahay shid mishiinka oo hagaaji waqtiga qalliinka iyadoo ku saleysan habka aan rabno inaan diyaarino waxayna noo ogolanaysaa inaynaan walwalin sababtoo ah si toos ah ayay u dami doontaa.
▷ Nadiifin fudud oo degdeg ah
Mid ka mid ah sifooyinka ugu soo jiidashada leh ee qalabka noocan oo kale ah ayaa ah sida yar ee ay wasakheeyaan, maqnaanshaha ur xun iyo sida ay u fududahay in la nadiifiyo. Intaa waxaa dheer, iyaga oo leh waxaad illowday saliidda saliidda ee ku dhacda moodooyinka caadiga ah.
Makiinada dhoobada ah waa la guuri karaa waxaana lagu dhaqi karaa weelka weelka, inkastoo dambiilaha lagu talinayaa in lagu sameeyo gacanta. Tani waa cillad yar oo kale oo leh moodooyin halkaas oo dhammaan qaybaha ay yihiin kuwa badbaado leh.
Cecotec-kani waxa uu inta badan ka kooban yahay laba qaybood, dhinac weel la mid ah dheriga caadiga ah iyo dhinaca kale daboolka sare oo gacan qabasho leh ka kooban dhammaan qaybaha korontada. Banaanka bac ayaa la isticmaalay si aan nafteena u gubin marka la taabto, u badan madow iyo cagaar ee kontaroolada.
Qaab dhismeedkeedu wuxuu ka samaysan yahay bir aan lahayn oo leh dahaar gudaha ah dhoobada aan dhegta lahayn si looga ilaaliyo qashinka cuntada inay ku dhegganaadaan. Waxa wanaagsan oo ku saabsan weelka la rari karo waa taas waxaa loo isticmaali karaa foornooyinka kale ama shooladaha, Haddii ay lagama maarmaan noqoto in la dhammaystiro cuntadaada.
Qayb ka mid ah daboolka ayaa ka samaysan quraarad, faa'iido ah in dhowr shiilood ay bixiyaan, taas oo naga dhigaysa Waxay kuu ogolaanaysaa inaad aragto cuntada mar walba oo aad si fudud u maamusho. Xaaladdan oo kale aad bay faa'iido u leedahay sababtoo ah qaabkani wuxuu ku talinayaa in aan walaaqno cuntada waqti ka waqti.
Cabirka: 36 x 32 x 31 cm iyo Miisaanka 4,5 Kgs
▷ Damaanada Isbaanishka
Qalabka ayaa la socda 2 sano damaanad, ugu yar ee lagu dejiyay sharciga Spain.
Alaabta la joojiyay!
Qaabkan waa la joojiyay laakiin waxaanu ku talinaynaa doorashooyin kale oo jaban:
Mashiinka Saliida Bilaashka ah ee Princess
MSRP wax yar ayuu ka sarreeyaa €80, laakiin waxay bixisaa qiimo dhimis 40% ah, ugu yaraan wakhtiga qorista. Waa ee ugu jaban taas oo laga heli karo suuqa oo leh kharash aad uga hooseeya celceliska.
Halkan waxaad ku arki kartaa qiimaha hadda ugu fiican labada dukaan ee online tixraaca:
Shiilan cunto oo wax-qabad badan leh oo karisa saliid la'aan
Weel dhoobo ah oo leh 5 litir, oo ku habboon foornada iyo shooladaha
Programmeable in wakhtiga iyo heerkulka
▷ Buugga Cunnada Cunnada Caafimaadka leh
Wax aad waxtar u leh ayaa ah taas keenaa buug cunto karinta oo aad u dhamaystiran oo ka bilaabmaya maalinta kowaad si uu u tijaabiyo faa'iidooyinkiisa. Sida haddii tani aysan ku filneyn, waxaad sidoo kale geli kartaa shabakadooda iyo shabakadaha bulshada halkaas oo aad ka heli doonto cuntooyin badan marka ay timaado cunto karinta.
Fiidiyowga waxaad ka arki kartaa sida isafgaradka Cecofry u shaqeeyo, gaar ahaan sida shiilan loo sameeyo saliid yar.
Inta badan isticmaalayaasha isku dayay Cecofry Compact Plus waxay ku faraxsan yihiin faa'iidooyinka aad ku hesho lacag yar. Fikradaha yar ee ka soo horjeeda gabi ahaanba maaha kuwo xaq ah haddii aad ogtahay waxaad iibsanayso. Ma filan kartid in cuntadu ay la mid tahay shiilanyada caadiga ah ama ay bixiso faa'iidooyin la mid ah noocyada kala duwan ee kala duwan.
Akhri faallooyinka iibsada
Qalabkani waa u fiican qofka aan go'aansanin ama bilawga ah ee aan doonaynin inuu wax badan ku maalgeliyo shiilan caafimaad qaba, laakiin waxay rabaan inay la kulmaan waxay awoodaan inay sameeyaan. In kasta oo xaqiiqda ah in ay tahay nooc cusub oo caddaalad ah, isticmaalayaashu guud ahaan way ku faraxsan yihiin iyo natiijooyinka ay bixiso.
▷ Faa'iidooyinka Cecotec Fryer
▷ Isbarbardhigga Fryers kale
Jadwalka xiga Waxaan barbar dhigeynaa Cecofry Compact Plus iyo moodooyinka kale ee la midka ah ee la qiimeeyo si aad si dhakhso ah u go'aansato ka ugu habboon baahiyahaaga.
Ma leedahay xadhig la'aan? Ma laha calbes qaadis ah.
Suxuun noocee ah ayaa lagu samayn karaa? Waxaad dubi kartaa, duban kartaa oo shiili kartaa hilibka, kalluunka, khudaarta, macmacaanka, iwm.
Waa buuq badan? Waxoogaa qaylo ah ayay ka samaynaysaa taageerayaasha, laakiin way yar tahay.
Miyaad ku qanacday dooda ay Cecotec soo bandhigtay Cecofry ka jaban? Waxaad ka iibsan kartaa online halkan:
Iibso Cecotec Compact Plus
(Codadka: 42 Celcelis: 3.2)
⭐ Fryer Saliid la'aan ah » ⭐ Cecotec » Compact plus
6 faallooyin ah "Cecotec Cecofry Compact Plus"
28 / 10 / 2019 at 14: 15
Waan hayaa waanan ku faraxsanahay, laakiin waxaan waayay buuggii oo ma garanayo sida aan ku heli karo
28 / 10 / 2019 at 19: 47
Hi carmen. Ku qor cecotec at http://www.cecotec.es/sat hubaal mid bay kuu diri karaan. salaan
17 / 12 / 2019 at 20: 50
Salaan, kaliya waxaan sameeyay dalabka shiilan, laakiin waxaan u maleynayaa inay noqon doonto mid aad u yar, waa 1,5 litir, in la kariyo laba ma ku filnaan doontaa? , Salaan.
23 / 12 / 2019 at 14: 29
Laba ahaan way ku filnaan kartaa, laakiin dabcan, waxay kuxirantahay qof kasta. Salaamu calaykum
01 / 11 / 2020 at 21: 27
Waxaan haystaa cecofry compact iyo fryer cuntada iyo tuubada iftiinka ee daboolka ayaa jabay, waxaa jira kayd ama beddelaad lagu beddelo.
16 / 03 / 2021 at 10: 49
Salaan Jose Luis,
Waa inaad kala hadashaa adeega farsamada ee Cecotec si aad u aragto haddii ay haystaan ​​beddelka qaybtaas.